घरबाट निस्कने बित्तिकै शव, दुध वा खाली भाडो देखे के हुन्छ ? — Sanchar Kendra
घरबाट निस्कने बित्तिकै शव, दुध वा खाली भाडो देखे के हुन्छ ?
कैयौं पटक भविष्यमा हुने केहि घटना विशेषगरी आर्थिक हानिका संकेत हामीले पहिले पाउन पनि सक्छौं । यदि यि संकेतलाई बुझ्न सकियो भने आर्थिक हानीबाट बच्न सकिन्छ ।
कहिलेकाहि घर बाहिर निस्कने बेलामा हुने अनौठो घटना मार्फत हामीले भविष्यमा हुनसक्ने आर्थिक हानीका बिषयमा जानकारी पाउन सक्छौ । यस्ता कुन कुन संकेत मार्फत मानिसले हुनसक्ने आर्थिक हानीका विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ ।
घर बाहिर निस्कदा हाच्छ्यु आउनु
घरबाट कुनै शुभ काममा निस्कदा हाच्छ्यु आएमा त्यसलाई अशुभ संकेत मानिन्छ । यसो हुदाँ कुनै न कुनै रुपमा काम बिग्रन सक्ने संकेत गर्दछ । पाका मानिसको सुझाव अनुसार यसरी घर बाहिर निस्कने बित्तिकै हाच्छ्यु आएमा केहिबेर रोकिनु पर्दछ । र सम्भव भए घर फर्कनु पर्दछ । घरमा केहि मिनेट बसेपछि सो काममा गए अशुभ समय टारीने मान्यता छ ।
बाटोमा माछा, हात्ती, शव देख्नु
कुनै काममा जादाँ बाटोमा माछा, हात्ती, पानको पात वा शव देखिएमा यसलाई शुभ संकेत मानिन्छ । यस्ता दृष्य देखिएमा मान्यता अनुसार भगवान स्वयं प्रकट भएको मानिन्छ । तसर्थ यस्ता दृष्य देखिएमा काम बन्ने मान्यता छ । यस अलावा बाटोमा फूल वा माला देखिएमा मांगलिक कार्य हुने संकेत मानिन्छ ।
दूध, खाली भाडो र फोहोर देख्नु
यदि घरबाट बाहिर निस्कदा खुट्टा हिलो वा गोबरमा परे वा दूध, खाली भाडो वा फोहोर देखिएमा यसलाई असफलताको सूचक मानिन्छ । यस्तोमा इष्ट देवको नाम लिइ भगवान शिव सम्झदै शिव–शिव जप गर्नु पर्दछ । साथै कुनै पनि शुभ कामका लागि जादाँ साथमा कलम वा रुमाल अनिवार्य बोक्नु पर्ने अन्यथा विवादमा पर्न सकिने मान्यता छ । शास्त्र अनुसार यस्ता केहि अशुभ संकेत भएमा केहिबेर रोकिई मिठाई र पानी खाएर हिड्नु पर्दछ ।
सडकमा सिक्का र नोट भेटिनु
यदि बाटोमा सिक्का भेटिए काम बन्न सयम लाग्ने संकेत मानिन्छ । तर नोट भेटिएमा रोकिएको काम बन्ने संकेत मानिन्छ । यदि दुबै भेटिए कसैको सहयोगमा काम बन्ने संकेत मानिन्छ । यसरी भेटिएको पैसाको वास्तविक धनी नभेटिए मन्दिरमा चढाउनु पर्ने वा गरीबमा दान गर्नुपर्ने मान्यता छ ।
यतै मानिसको बौद्धिकतामा उसको स्मरण शक्ति र एकाग्रताले ठूलो महत्व राख्दछ । मानिस एकाग्र भए मात्र उसको आइक्यू बढ्ने वा स्मार्ट हुन मद्दत गर्दछ ।
दशैंमा पोलेको, भुटेको र अधिक बोसो भएको मासु खान हुन्छ कि हुदैन ?